Tuur bir macmal ah
Birta tuurku waa shey ka kooban inta badan birta, kaarboon, iyo silikoon.
Alloysyadaas, kaarboonku wuxuu ka sarreeyaa inta lagu hayn karo xalka adag ee austenite heerkulka eutectic.
Macdanta Cast-ka waa macdanta birta-kaarboon oo leh kaarboon ka kooban wax ka badan 2.11% (guud ahaan 2.5 ~ 4%) .Waa maaddo isku-dhafan oo isku-dhafan oo leh bir, kaarboon iyo silikoon oo ah walxaha ugu muhiimsan oo ka kooban manganese, baaruud, fosfooras badan iyo waxyaalaha kale ee wasakhda ah marka loo eego birta kaarboon-ka ah.Mararka qaarkood si loo hagaajiyo astaamaha farsamo ee birta birta ama jirka, guryaha kiimikada ah, laakiin sidoo kale ku dar qaddar cayiman oo ah walxo, bir bir ah.
Horaantii qarnigii lixaad ee da'da BC, Shiinaha wuxuu bilaabay inuu isticmaalo birta birta, marka loo eego waddamada Yurub ku dhowaad laba kun oo sano ka hor. Birta wali waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee wax soo saarka warshadaha.
Marka loo eego qaabka kaarboon ku jirta birta birta ah, birta birta loo qaybin karo
1.White cast cast marka laga reebo in yar oo ku milmi kara ferrite, inta kale ee kaarboonka qaab cementite waxa uu ku jiraa birta birta ah, jabkeeduna waa lacag-cad, waxa loo yaqaan birta cad ee cad. sameynta birta iyo banaan si loo soo saaro birta birta ka samaysan.
Kaarboon birta birta ah dhammaan ama inta badan garaafka garaafku wuxuu ku jiraa birta kabka, jabkeeduna waa cawl madow, waxa loogu yeeraa birta cawlan ee cawlan.
Qayb ka mid ah kaarboonka birta birta ah ayaa ku jira qaab garaaf, oo la mid ah birta cawlan Qaybta kale waxay ku jirtaa qaab sibidh bilaash ah oo la mid ah birta cad ee birta ah. Godka madow iyo midka cad ee jabka, waxa loo yaqaan birta birta ah. Noocan birta birta sidoo kale waxay leedahay adkaansho iyo jajabin weyn, sidaa darteed si dhif ah ayaa loogu adeegsadaa warshadaha.
Marka loo eego qaab-dhismeedka garaaf ee kaladuwan birta birta ah, birta birta ayaa loo qaybin karaa
1. Garaafka birta cawlan ee cawlan waa jajab.
Graphite-ka ku jira birta la shubay waa mid la isku qurxiyo.Waxaa laga helaa bir cad oo gaar ah ka dib marka lagu duubo heerkul sarreeya muddo dheer. Qalabka farsamaysan (gaar ahaan adkaanta iyo baaxadda) ayaa ka sarreeya birta cawlan, sidaas awgeed waxaa badanaa loo yaqaan Bir bir ah oo la malayn karo
3.Gabrafta ku jirta birta birta ah ee loo yaqaan 'nodular cast is spherical.It waxaa lagu helaa daawada fiiqan ka hor inta aan lagu shubin birta la shubay. Noocaan birta ah ee la shubay ma aha oo kaliya in uu leeyahay aalado farsamo oo ka sarreeya birta cawlan iyo birta birta ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay hanaan wax soo saar ka fudud Bir bir ah oo la malayn karo Intaa waxaa dheer, astaamaheeda farsamada waxaa lagu sii wanaajin karaa iyada oo loo marayo daaweynta kuleylka, sidaas darteed waxaa si ballaadhan loogu isticmaalaa wax soo saarka.
Tuur bir bir qolof ah dahaarka leh
Saxanka birta tuur
Xadhig bir bir ah
Giraanta birta ah ee caadiga ah
Kiis bir ah oo khaas ah
Tuur biibiile bir ah
Qalabka tuubbada birta ah tuur
Giraan bir ah